I-White House Beach Cabin - I-Airbnb
I-White House Beach Cabin
Santa Maria , Machangulo, i-Mozambique
I-indlu eyakhiwe ngamapulangwe ephelele ibungazwe ngu-Ricardo
Ihora nje kuphela uma uhamba ngesikebhe usuka eMaputo le ndlu yasolwandle elula enokubukwa okumangalisayo kolwandle yakhiwe ngokwemvelo. Eduze kweNdawo Yezindlovu, amahlengethwa, ama-flamingo, izinkawu nama-duiker abomvu yizivakashi ezivamile. Jabulela ulwandle oluhlanzekile oluthulile kanye ne-snorkel endaweni yokulondoloza imvelo emangalisayo. 5min ukuhamba ukhuphuka usuka ogwini uye ekhabetheni.
Futhi sicela ungabi nokulindela okuphezulu ngenxa yezibuyekezo ezimangalisayo :) Kumane nje kuyindlu yokhuni elula.
Sicela ukhumbule ukuthi yindlu yokhuni nje elula. Ungakhohlwa ukuthi i-Afrika le, njengazo zonke ezinye izindlu ezisehlathini, kungaba nezinambuzane ezizungezile.
Akukaze kuze kube yilolu suku sebiwe izinto, kithi noma kunoma imaphi amakhasimende. Ungagcini nje imali namagajethi ngaphandle. Ebhishi zigcine zifihliwe futhi ungazishiyi kude nawe.
Qaphela nge-Hells Gate (Ishaneli phakathi kwe-Santa Maria ne-Inhaca) amaza anamandla kakhulu ngezinye izikhathi.
Phansi ogwini lolwandle phambi kwekhabhinethi amanzi athule futhi ahamba kancane alungele izingane.
Amanzi aphuma emthonjeni. Siyawuphuza futhi ungapheka ngawo. Sebenzisa amanzi ngokuhlakanipha.
Ngeshwa ukunqanyulwa kukagesi kuvamile. Ngokuvamile azihlali isikhathi eside.
Sicela uvale i-AC lapho uphuma endlini.
Awekho ama-ATM eduze, ngakho-ke sicela ukhumbule ukuhamba nemali.
Ayikho i-Wi-Fi ekhabetheni kodwa kune-Wi-Fi endaweni yokudlela yasendaweni ngama-meticais angu-250/ngosuku (+/-4$/ngosuku).
Okuwukuphela kwamaNethiwekhi atholakalayo iVodacom (engcono) neMovitel (ayinhle kangako) womabili ane-3G. Ungathenga amakhadi e-SIM endaweni yase-Santa Maria. Kodwa kungcono ulethe usuka eMaputo, uzodinga ipasipoti yakho ukuze ubhalise.
Kunesitolo esincane esiseduze (imizuzu eyi-15 ngezinyawo) lapho ungathola khona isinkwa sasendaweni esisha, amanzi, iziphuzo ezibandayo, ubhiya, ubisi nezinye izinto eziyisisekelo njengama-crackers, ama-chips, ufulawa, ushukela, utamatisi, u-anyanisi, amafutha, imayonesi, irayisi, ispaghetti. . Uma kukhona okudingayo esitolo vele ubuze isisebenzi. Kuwuhambo lwamaminithi angu-15 lapho. Ngakho konke ukudla ongase ukufune kangcono ukuthole eMaputo ngaphambi kokufika. Isitolo futhi njengePanado & Granpa.
// Indawo yokudlela & Indawo yokudlela
Kunebha ethandekayo ogwini (imizuzu engu-7 ngezinyawo) lapho ungaya khona ukuze uthole iziphuzo futhi ungazama i-R&R edumile. Hlala ukushona kwelanga.
Kukhona nendawo yokudlela enhle (imizuzu eyi-10 ngezinyawo) lapho ungajabulela khona ukudla kwaseMozambique, konke ngentengo enhle. Ukudla kwasolwandle kuhle, amapuleti amakhulu ahlanganisa amaPrawn, amalobster, Inhlanzi Yasendaweni Entsha, iCalamari kanye Nenkukhu.
//Ezokuthutha - Isikebhe
Ukufika lapho cishe ihora elingu-1 ngesikebhe. Uma unesikebhe sakho esihle, ngaphandle kwalokho ngingakusiza ukuthi uhlele ezokuthutha ngesikebhe esinezindleko ezengeziwe.
Njengoba ungase ucabange ukuthi i-Santa Maria inokwethenjelwa kakhulu kwesimo sezulu. Uma uhamba ngesikebhe. Kufanele uqonde njalo ukuthi maningi amathuba okuthi isimo sezulu singabi sihle. Ngakho-ke kuhlale kukuhle ukuba nezinsuku eziguquguqukayo uma kungenzeka. Kuye ngesimo sezulu kungase kudingeke uhambe noma ubuye ngosuku olwedlule noma ngosuku olulandelayo uma izinsuku ozikhethile zinomoya. Kungenzeka ukuthi isimo sezulu esihle zombili izinsuku, kuyinto nje okufanele uyicabangele. Ungahlala ungibhalela ezinsukwini ezimbalwa ezedlule, ukuze nje uhlole isimo sezulu.
// Ezokuthutha - ImotoUma ushayela, KUMELE UBE NE-4x4 (Hhayi i-SUV). Uhambo luthatha cishe amahora angu-4/5 ukusuka eMaputo (kuzoba inselele uma ungajwayele ukuphuma emigwaqweni) (zama ukungena esangweni le-Elephant Reserve ngo-2pm kamuva nje) Ayikho inethiwekhi iningi lendlela ngakho-ke sicela uqinisekile ukuthi ululungiselele lolu hambo. Ukufinyelela kwayo akulula futhi ngicela ungicele ama-coordinates asekhaya ukuze akusize ufike lapho (imali ngeke ibuyiselwe uma ungakwazi ukufika endlini). Kodwa kuyamangaza, ngoba udlula e-Elephant Reserve futhi wenza i-Safari emangalisayo. Okujwayelekile ukubona kuhlanganisa Izindlovu, Indlulamithi, Amadube, Izimvubu, Izinkonkoni, Izingwenya, AmaKudu, Izimpala, Izilwanyane, AmaDuiker nokunye okuningi.
I-Google Maps inawo umzila lapho. Zama ngalezi zixhumanisi. Uma usungenile esiqiwini sezindlovu kufanele ulandele izigxobo zikagesi. Ngoba badlula ngemuva kwendlu. Uma uqala ukuqhela kubo vele uthathe umgwaqo olandelayo oya kuloya hlangothi. Kufanele ube nefoni esebenzayo ukuze ngikwazi ukukusiza ukuthi ufike endlini. Sike saba namakhasimende alala ebusuku e-Elephant Reserve ngoba abambeke.
Indawo yendlu -
26° 5' 32.694'' S
32° 57' 11.4948'' E
Inombolo yomthetho: 32.95321226
Sicela uqaphele kakhulu lapho ubhukuda eduze kwesiteshi (Hells Gate) kanye ne-Inhaca Marine Reserve lapho utshuza, ikakhulukazi uma amanzi ephuma. Imisinga yayo eyingozi kakhulu futhi enamandla. Zigcine useduze nobuhlungu.
Abekho ama-Lifeguards endaweni ngeshwa.
4.93 · 147 okushiwo abanye
Sizohlala sitholakala ocingweni ukuze sikusize ngesikhathi uhlala.